aqoonsadaan Music la Apps aqoonsi 3 music
Sida loo aqoonsado Music la Apps aqoonsi 3 music
Qaybta 1.How si ay u aqoonsadaan Music la Shazam
Qaybta 2.How si ay u aqoonsadaan music la Soundhound
Qaybta 3.How si ay u aqoonsadaan Music la Hound
1. Sida loo aqoonsado Music la Shazam
Shazam waxa uu noqday mid ka mid ah codsiga ugu wanaagsan ee lagu aqoonsanayo music . Waxaa qaada xaaladda in lagu caajiso meesha aad ku hadhay u jiibinayaan song in aanad garanayn oo artist yahay ama horyaalka ee heesta. Tani gaar ahaan waa dhibaato ka fiirsaneysa in ay jiraan heeso badan la sii daayay maalin kasta iyo mid si fudud ku guuldareysato kara in ay sii. Inkasta oo ay jiraan tiro ka mid ah codsiyada in karaa badan shaqo la mid ah, Shazam waa ku weyn yahay, waayo, isla aqoonsiga of music, sahaminta, iibsashada iyo qaybsiga, oo waxa uu xitaa tilmaamaysaa TV idinku wareegsan. Daar Auto Shazam iyo dhawri doonaa helitaanka music iyo TV xitaa marka app la tagay oo aan waxtar lahayn. Sidaas waxa uu kaa caawin karaa inaad hubi dhawaaqa trending ka dunida oo dhan, oo aad raalli cusub maalin kasta ka fanaaniinta jecel Shazamed.
Codsiga taageertaa macruufka iyo rating waa 3.9, taas oo soo jeedinaya in ay kaalinta celcelis ahaan ay dadka isticmaala.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo software waxaa ka mid ah awooda in la ogaado music cusub, dhegayso raadiyaha iyo muusig. Qasaaraha ka mid ah in ay tahay oo kaliya diyaar u ah iPhone iyo iPad iyo cabashooyinka joogto ah oo ku saabsan adeegga macaamiisha ay.
Waxaad codsigan halkan kala soo bixi kartaa, https://itunes.apple.com/us/app/shazam/id284993459?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Sida loo aqoonsado music isticmaalaya Shazam
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda codsiga. Waxaa Launch
Marka hees aad rabto in la ogaado waxa uu u ciyaarayaa, ka jaftaa Shazam
Codsiga waxaa ka baadhi doona oo soo bandhigaan macluumaadka ku yaal bogga.
2. Sida loo aqoonsado music la Soundhound
SoundHound waxa lagu tilmaamay albaab u music search, helitaanka iyo play. Waxa kale oo ka mid ah codsiyada in ay noqdaan dad fiican adduunka ah meesha soo saarayaasha music sii daayo albums si maalinle ah iyo ilaalinta la gabayadii Wanaagsan waxaa u ahaada halgan, ama song in classic in aad si lama filaan ah maqli aad shaqada u socdo laakiin aad ilowday oo artist yahay iyo horyaalka. Waa awood leh awoodda ay leedahay in la aqoonsado ciyaaro music aad hareeraha ka mid ah qaababka kale ee la yaab leh. Waa weyn oo isla aqoonsado heeso iyo xitaa arki lyrics ah, ku dar in an Rdio ama Spotify playlist, wadaago saaxiibo, iibsan ama loo raadinayo dheeraad ah oo ka soo fanaaniinta aad taqaanid iyo jacaylka ama hadda soo helay.
Old music dugsiga
Gabyaya oo u jiibinayaan aqoonsiga
Rating ee app waa 4.5, taas oo soo jeedinaya in kaalinta ugu sareysa marka loo eego codsiyada la mid ah. Waxa ay taageertaa iPhone iyo iPad.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo app waxaa ka mid awood u leh inay dhagaystaan ​​heesta aqoonsan yahay, dhegayso raadiyaha, iyo helitaanka music cusub. Qasaaraha ka mid ah IDs xadidan muddo bil ah.
Waxaad codsigan halkan kala soo bixi kartaa, https://itunes.apple.com/us/app/soundhound/id355554941?mt=8&uo=4&at=10l4CB
Aqoonsiga music isticmaalaya SoundHound
Codsiga Download ka URL lagu siiyey, waxaa loo soo dajiyo oo aan bilowno on qalab aad
Marka song la ciyaaro idinku wareegsan. Tubada button SoundHound si dhakhso loo ogaado heeso iyo arko xitaa lyrics ah.
3. Sida loo aqoonsado Music la Hound
Hound waa mid ka mid ah codsiyada hogaanka aqoonsado music. Waxaa si gaar ah caan ah oo la aqoonsday music degdeg ah. Uma baahnid in aad wax ku qor, waxaad ka raadin codkaaga, waxaa ku hadlo, aad u hesho. Waxaad oran kartaa magaca song ama urursadaan aad ogtahay in aad hesho muxibada deg dega ah. Sidoo kale, taageerada isku halaynta iyo macaamiisha marka laga reebo wuxuu saaraa meeshii kale. A daba-gal ku comments ku muujin karaan sida dadka isticmaala waayo-aragnimo u siman codsiga ku raaxaysan.
Qasaaraha: in feature aqoonsi music weli u baahan horumar.
Aqoonsiga music isticmaalaya Hound
Download codsiga ka URL kor ku bixiyo iyo rakibi in aad telefoon oo abuurtaan.
Tubada button Hound ah
La hadal si dhakhso ah oo si cad u galay makarafoonka qalab ee (hooseysa qalab ama iyada oo headset Mic-karti on iPods). Waxaad dhihi kartaa song oo kale ah "Add Me In by Chris Brown". Ama waxaad kaliya dhihi karaa magaca urur ama song horyaalka ah: "West Life" ama "la jabin karin".
Ka dib markii la hadlayay, ka jaftaa button Hound mar kale.
(Power user tip jawaab xitaa dhakhso: waxaad sidoo kale riixi kartaa oo qaban button Hound ah, hadlo, iyo in la sii daayo badhanka.)
> Resource > Music > Sida loo aqoonsado Music 3 Music Aqoonsiga Apps